निर्देशक सुरेन श्रेष्ठले कसलाई गरे त ‘माया’ ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
निर्देशक सुरेन श्रेष्ठले कसलाई गरे त ‘माया’ ?
युट्युबमार्फत प्रिमियर गरि अष्टेलियामा सक्रिय सुरेन्स फोटोग्राफी एण्ड टिम अर्थात स्टाट प्रो इन्टरटेन्मेन्टले ‘माया’ शीर्षकको सर्ट फिल्म तयार पारेको छ । करिव १० मिनेट लामो यो फिल्ममा तीन जना कलाकारले आकर्षक अभिनय गरेका छन् ।
छोटो समयमै थुप्रै म्युजिक भिडियो तथा एउटा सर्ट फिल्म निर्माण गरिसकेको सुरेन्स फोटोग्राफी एण्ड टिमको यो दोश्रो सर्ट फिल्ममा निर्देशक सुरेन श्रेष्ठले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
अभिनेता श्रेष्ठलाई निकिशा दाहाल तथा प्रेरणा थापाले अभिनयमा साथ दिएका छन् । दुई अक्षरले बनेको शब्द मायाका विभिन्न परिभाषाहरु मध्येको एक अर्थातमा मायामा प्रतिक्षा पनि अनिवार्य हुन्छ भन्ने सन्देश बोकेको यो फिल्मको निर्देशन सुरेन श्रेष्ठले गरेका हुन् ।
स्याट प्रो ईन्टरटेन्मेन्टले यस पिपुल स्टडीसँग सहकार्य गर्दै यो फिल्म निर्माण गरेको हो । फिल्मको कथा, पटकथा तथा सम्बाद पनि निर्देशक श्रेष्ठले नै तयार पारेका हुन् । निर्देशक श्रेष्ठले फिल्मको सिक्वेलका लागि कथालाई रोमाञ्चक शैलीमा बिट मार्ने प्रयास गरेका छन् ।
मायाको भाग २ पनि केही साताभित्रै प्रदर्शन हुने निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् । अष्टेलियाकै यस पिपुल स्टडीले मुख्य प्रायोजन गरेको यो फिल्मको अन्त्यमा गायक तथा अभिनेता यस कुमारले आकर्षक शैलीमा मायालाई परिभाषित गरेको सम्वाद समावेश गरिएको छ ।